အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ မြေပုံ အရီဇိုးနား အရောင်ခြယ်ပြထား
ဟိုပီတို့သည် ယနေ့ထက်တိုင် အောင် မိရိုးဖလာ ထုံးစံဓလေ့များ ကိုထိန်းသိမ်းထားကြသည်။အယ်ရီဇိုးနားပြည်နယ်တွင် စပိန်လူမျိုး နှင့် တိုင်းရင်းသား အင်ဒီးယန်းလူမျိုးတို့ သွေးစပ်သော လူမျိုး အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။ နေအိမ်တွင်များသောအားဖြင့် စပိန်ဘာသာ စကားကို ပြောဆိုကြသည်။ ၁၆ ရာစုနှစ်တွင် ထိုပြည်နယ်ဒေသသို့ စပိန်လူမျိုးသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များ ဦးစွာရောက်ရှိလာပြီးနောက်၊ မက္ကဆီကိုလူမျိုးများလာရောက်၍ အခြေစိုက်နေထိုင်ကြသည်။ထို့နောက် ပြည်နယ်တွင် မီးရထားလမ်း ပေါက်သောအခါ အင်္ဂလို-အမေရိကန်လူမျိုးများ ဝင်ရောက်လာ ကြသည်။အယူဝါဒများအနက် ဗရင်ဂျီဂိုဏ်းဝင်ဦးရေမှာ အများဆုံးဖြစ်သည်။
mla.org Archived 15 August 2013 at the Wayback Machine. 2005 American Community Survey. Retrieved 2010-07-13.
Arizona - Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary။ Merriam-webster.com (2007-04-25)။ 2010-07-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2000 to July 1, 2008။ United States Census Bureau။ 2009-02-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Elevations and Distances in the United States။ U.S Geological Survey (April 29, 2005)။ November 3, 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။